Xilliga la qabanayo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo la shaaciyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Xilliga la qabanayo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo la shaaciyay
Xilliga la qabanayo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo la shaaciyay
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Guddiga doorashada guddoonka Baarlamaanka ee Galmudug ayaa Isniintii maanta soo saaray Jadwalka doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa, kadib markii ay magaalada Dhuusamareeb ku kulmeen.
Guddigan oo ka kooban shan iyo toban xubnood ayaa Magaalada Dhuusamareeb ka soo saaray jadwal ay tahay in loo raaco Doorashada guddoonka Baarlamaanka Galmudug.
Jadwalka ayaa waxaa ku cad in Doorashada Guddoonka Baarlamaanka Galmudug la qaban doono 17-ka bishan, oo ku aadan maalinta Jimcaha.
Musharaxiinta u tartameysa guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug iyo Gudoomiye Ku-xigeenka ayaa waxaa araajida laga qaban doonnaa 14-ka illaa 15-ka bishan.
Musharaxiinta ayaana khudbadahooda jeedin doona 16-ka bishan January.
Guddiga doorashada guddoonka Baarlamaanka ee Galmudug
Xilliga la qabanayo doorashada Baarlamaanka